Title: "7Day Daily" (၇ ရက်နေ့စဉ် သတင်းစာ)
Description/subject: Update News... News... Health... Education... Technology... Environment... Tourism... Business... Life... Entertainment... Opinion... Politics... Regional... Sports... World News... Cartoon... Videos... Special Reports: Archives back to May 2014. ၂၀၁၅ရွှေးကောက်ပွဲ ၊ သတင်း၊ပညာရေး၊စက်မှူလက်မှူ၊ပတ်ဝန်းကျင်၊ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား၊မှုးခင်း၊စီးပွားရေး၊ဘ၀၊ဖျော်ဖြေမှူ၊အမြင်၊နိူင်ငံရေး၊ဒေသအလိုက်၊အားကစား၊ကမ္ဘာသတင်း၊ကာတွန်း၊ဗီဒီယိုများ၊ အထူးအစီရင်ခံစာများ
Source/publisher: 7Day Daily (၇ ရက်နေ့စဉ် သတင်းစာ)
Title: "Burma Today" (Burmese မြန်မာဘာသာ )
Description/subject: Various news stories in Burmese အဖွင့်စာမျက်နာ၊သတင်း၊ဆောင်းပါး၊ကဗျာ၊အနုပညာ၊ဓါတ်ပုံ၊ဗီဒီယို၊အသံ၊ကျွန်တော်တို့အကြောင်း၊ဆက်သွယ်ရန်
Source/publisher: Burma Today (Burmese မြန်မာဘာသာ )
Description/subject: Democracy movement, Burmese language radio; English on site သတင်း၊ရုပ်သံသတင်း၊မေးမြန်းခန်း၊နိုင်ငံတကာ၊ဓါတ်ပုံ၊သုံးသပ်ချက်၊ဆောင်းပါး၊သုံးသပ်ချက်။
Title: "Eleven" (Burmese/ မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: "Eleven" Burmese: Editorial...Politics...Business...National news...Articles ...Entertainment news...International news...Sport news... "အီလက်ဗွီး မြန်မာ၊ အက်ဒီတာ့အာဘော်၊ ၂၉ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်း၊နိုင်ငံရေး၊သတင်း၊ပြစ်မှု၊စီးပွားရေး၊အင်္ဂါရပ်များ၊အမေးအမြန်း၊နိုင်ငံတကာရေးရာ၊ဖျော်ဖြေမှု၊ အားကစား။
Title: "Frontier Myanmar" (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: သတင်း၊အထူးကဏ္ဍ၊စီးပွားရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊Frontier အကြောင်း။ "Frontier Myanmar သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အပတ်စဉ် ထုတ်ဝေသည့် မဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ရေးရာနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍ၌ နက်ရှိုင်းသော သုံးသပ်ချက်များနှင့်အတူ ဘက်လိုက်ခြင်းကင်း၍ မျှတသော ဆန်းစစ်ချက်များဖြင့် တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ရာ ပရိသတ်၏ အားပေးမှုကို မျှော်လင့်လျက် ရှိပါသည်။ ကြော်ငြာနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၄၂၃၇၀၆၁၇၈ (သို့) eikhinezar@logimediamyanmar.com ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။"
Description/subject: News: Entertainment... Social... Politics... Education... Health... Lifestyle... Crime... Business.....Video: Entertainment... Social... Politics... Education... Health.....Business: Finance... Investment... Social Responsibility... Labor... Interview... Trade... Property... Companies.....Food: Myanmar... World... Ethnic... Chinese... Indian... Thai... Japanese... Organic... Indonesian.....Interview: Entertainment... Business... Social... Education... Health... Women... Environment... Youth... အဖွင့်စာမျက်နာ၊စီးပွားရေး၊မြန်မာ၊ဖျော်ဖြေရေး၊အပတ်စဉ်၊လှုမှုရေး၊လှုမှုဘ၀၊ပတ်ဝန်ကျင်၊နိုင်ငံရေး၊ကျန်းမားရေ၊ယဉ်ကျေးမှု၊အချစ်၊လူငယ်၊အလှအပ၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊ အစားအစာ။
Description/subject: ကြေးမုံသတင်းစာ (၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၇ အထိ)
Description/subject: "Mizzima" Burmese: Sections on news, business, interviews and special events.....News Section: local...egional...world...politics...health...technology.....Special Events Section: 2014 water festival...U Win Tin’s funeral...international peace day...2014 ASEAN meetings...Daw Aung Sun Su Kyi’s trips abroad…Obama’s trip to Myanmar...Women’s Forum Myanmar ASEAN 14.....Archived sections (at top of the page, some from 2013): news (from January 2013)…business (from January 2013)…interviews (from January 2013)…special events (from July 2013).….. သတင်း၊ အားကစား - ပြည်တွင်း၊နိုင်ငံတကာ၊ စီးပွားရေ-ပည်တွင်း၊နိုင်ငံတကာ၊အတွေးအမြင်၊ကမ္ဘာသတင်း၊ဖျော်ဖြေရေး၊မာလ်တီမီဒီယာ၊ရွေးကောက်ပွဲ၊အထူးကဏ္ဍ။
Description/subject: မြန်မာအလင်း (၂၀၀၃ မှ၂၀၁၇)
Title: "Myanmar Times" archive (Burmese/ မြန်မာဘာသာ )
Description/subject: မြန်မာတိုင်း သတင်းလင့်(ခ်) (၂၀၁၃-၂၀၁၅)
Description/subject: Lots of links to news sites in Burmese and English - to explore မြ၀တီနေစဉ် သတင်း မှ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ သတင်း ၀က်ဆိုဒ် များ၊
Title: "Myintmakha" (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Domestic, politics, business, entertainment, technology, features, editorials and international. ပြည်တွင်းသတင်း၊စီးပွားရေး၊ ကမ္ဘာသတင်း၊နိုင်ငံရေး၊မေးမြန်းခန်း၊ဆောင်းပါး၊အယ့်ဒီတာအာဘော့်၊စက်မှုလက်မှု၊ဖျော်ဖြေရေး၊သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ၊ လူမှုဘ၀၊ အခြားအကြောင်းများ။
Title: "Yoyarlay" (ရိုးရာလေး)
Description/subject: ပွညျတှငျး ပွညျပသတငျး၊ စီးပှားရေး၊ သိပ်ပံနှငျ့နညျးပညာ၊ အားကစား ကနျြးမာရေး ၊ အတှေးအမွငျ စုံလငျသော အငျတာနကျ သတငျးစုစညျးမှု ဝကျဘျဆိုကျ
Description/subject: Myanmar market journal ကျောင်းကန်ဘုရား၊အထူကဏ္လ၊ခေတ်ပြိုင်စီးပွားရေးအမြင်၊နိုင်ငံတကာအရေး၊သူ့အတွေ့သူအမြင်၊သိပ္ပံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ကျန်းမားရေး၊ သူတို့ဘ၀မှတ်တမ်း၊စာပေနှင့်အနုပညာ၊သင့်အတွက်ဗေဒင်၊ပြည်တွင်းစီးပွား။
Title: Myanmar Now (Burmese - မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: News: All News...သတင်းများ... Business...စီးပွားရေး... Elections...ရွှေးကောက်ပွဲ... Environment...ပတ်ဝန်းကျင် Ethnic Issues...တိုင်းရင်းသားရေးရာ... Humanitarian...လူသားချင်းစာမှူဆိုင်ရာ... Human Rights...လူအခွင့်အရေး... Politics...နိုင်ငံရေး... Social.....လူမူရေး... Resources: All Resources...သိကောင်းစရာများ... Candidates...ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ... Constituencies...မဲဆန္ဒနယ်များ... Parties...ပါတီများ... Guides.....လမ်းညွန်းချက်များ... About us.... ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း...